Caruur Biyo Sumaysan Cabtay Oo Ku Geeriyootay Magaalada Burco Iyo Badhasaabka Oo Ka Hadlay Cida Ay Falkaa U Qabteen | Araweelo News Network (Archive) -
Burco(ANN) Afar dhalinyaro ah, ayaa caawa ku geeryooday magaaladda Burco mid kalena waxa uu galay xaalad halis ah, ka dib markii ay cabeen biyo sumaysan oo yaalay Masaajid hortii, waxaana markiiba goobtaa ku geeriyooday laba ka midda Wiilashii, labadii kalena waxa loola cararay Cisbitaalka
guud ee magaaladda Burco, halkaas oo ay ku geeryoodeen.
Gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasin Maxamed Cabdi ayaa Sheegay in Caruurtu ay ahaayeen ‘’ shan wiil oo dhalinyaro ah, oo ka yimid magaaladda Dibadeeda, ayaa waxay yimaadeen, Masaajid ku yaaala Xaafadda Hodan Qaylo, ka dibna waxay cabeen Biyo ku jiray Caaga, biyahaasi waxa markiiba tufay mid ka mida wiilashaasi, kuwii kalena si weyn bay u cabeen laba goobtii ayay ku dhinteen labana dhakhtarka ayay ku dhinteen. Ayuu yidhi Badhasaabka gobolka Togdheer oo ka hadlayay arrintaa naxdinta leh.
Wuxuuna intaa ku daray Badhasaabku in Biyaha ay dhalinyaradaasi cabeen, ahaayeen kuwo sumaysan, oo lagu daray Sunta Cayayaanka, isla markaana Nin ay Boolisku u qabteen falkan uu qirtay , kaasoo hadda lagu hoayo saldhiga dhexe ee Burco laguna wado baadhitaan”.
Caruurtaa oo ahaa shan ayaa kii shanaad lagu daweynayaa Cisbitaalka guud ee magaaladda Burco, waxaana gacanta lagu hayaa sida uu sheegay gudoomiyuhu ninkii dhigay caagada biyaha sumaysani ku jireen , kaas oo magaciisu yahay Faarax Axmed Seed Caateeye, isla markaana isagu qirtay in uu biyaha Wiilashu cabeen ku shubay cagadaasi oo sumaysnayd.
Magacyadda iyo da’da caruurta ku geeryooday Biyahaa sumaysan ayaa waxay yihiin sidan:-
1 Axmed Cabdi Maxamed 15 Jir
2 Mustafe Jaamac Cabdilaahi 10 jir
3 Axmed Maxmed Cabdi 12 jir
4 Abokor Maxamed Cabdi 11 jir.